Schaff Trend Cycle Inkomba ye MT4 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Schaff Trend Cycle Inkomba ye MT4
Schaff Trend Cycle Inkomba ye MT4
Isingeniso seSchaff Trend Cycle Indicator
1 Isingeniso seSchaff Trend Cycle Indicator
2 Siyini iSchaff Trend Cycle Indicator?
3 Isebenza Kanjani Isikhombi Se-Schaff Trend Cycle?
4 Indlela yokusebenzisa i-Schaff Trend Cycle Indicator ye-MT4
Okukhuphukayo kumele kubuye phansi. Umthetho ofanayo wamandla adonsela phansi uyasebenza nasekuhambeni kwamanani. Noma kunjalo, ukubeka isikhathi ukuguqulwa okunjalo kungaba nzima impela.
Ake sihlole isibonisi se-Schaff Trend Cycle esenzelwe inhloso yokukhomba ukuthambekela noma ukubuyela emuva ngamandla.
Siyini iSchaff Trend Cycle Indicator?
Inkomba yeScyff Trend Cycle ingumfutho noma inkomba elandelayo yenkomba ebuye ibe uhlobo lwenkomba ye-oscillator. Inikeza izinkomba zenani lentengo elithengwe ngokweqile noma elingaphezulu, kanye nezimpawu eziguqukayo ezivela kumazinga entengo athenge ngokweqile noma ngaphezulu.
Ihlela umugqa obushelelezi oscillates ngaphakathi kobubanzi bukaziro kuye 100. Izinkomba ze-Schaff Trend Cycle nazo zinokumaka emazingeni 25 futhi 75. Indawo engezansi 25 ikhombisa amazinga emakethe athengisiwe, ngenkathi indawo engenhla 75 ikhombisa amazinga emakethe athengwe ngokweqile.
Isebenza Kanjani Isikhombi Se-Schaff Trend Cycle?
ISchaff Trend Cycle isebenzisa ipheya elingaphansi lama-Exponential Moving Averages (UMAMA) ukunquma ukuthambekela kwayo. Iphinde ingeze umphumela obushelelezi ekuhlanganisweni kwayo ukuze inciphise ukuthambekela kwayo kwizimpawu ezingamanga futhi ikhulise ukunemba. Ngaphandle kwalokhu, inkomba ye-Schaff Trend Cycle ifaka inani lezikhathi ngaphakathi kokubalwa kwayo njengendlela yokunquma ukunyakaza okujikelezayo kwemakethe.
Indlela yokusebenzisa i-Schaff Trend Cycle Indicator ye-MT4
Le nkomba inokuhlukahluka okuningana okubucayi okungashintshwa ngaphakathi kwezilungiselelo zayo.
Okuguquguqukayo kwe- "MAShort" ne- "MALong" kuphathelene nolayini be-EMA abangaphansi abazosetshenziselwa ukubala ukuqondiswa kwethrendi.
“Umjikelezo” ubhekisela enanini lezikhathi lapho isibonisi singasekela ingxenye yaso yokujikeleza kuyo.
I- “CountBars” imane nje iyinombolo yezikhathi zomlando lapho inkomba isazofunda khona ukuthambekela noma umfutho wokuqondisa.
Ukuze usebenzise le nkomba kahle, kungcono ukwengeza amazinga 25 futhi 75 njengezimpawu, izinkomba eziningi zeSchaff Trend Cycle ezinazo. Abahwebi bangasebenzisa ukweqa ulayini weSchaff Trend Cycle ovela ngezansi 25 ukudlula ngaphezu kwayo njengesiginali yokubuyisela emuva ye-bullish evela ezingeni elibekiwe. Ngokuphambene, umugqa ovela phezulu 75 Ukweqa ngezansi kuzokhombisa isignali yokubuyiselwa emuva ye-bearish evela ezingeni lentengo ekhokhelwe ngokweqile.
Ulayini we-Schaff Trend Cycle kufanele uvele ngezansi 25. Vula i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho ulayini weSchaff Trend Cycle weqa ngenhla 25. Setha ukulahleka kokuma ezingeni lokusekela ngezansi kwekhandlela lokungena.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa weSchaff Trend Cycle uqala ukugoqeka phansi.
Ulayini we-Schaff Trend Cycle kufanele uvele ngenhla 75. Vula i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho ulayini weSchaff Trend Cycle weqa ngezansi 75. Setha ukulahleka kokuma ezingeni lokumelana ngaphezu kwekhandlela lokungena.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho umugqa weSchaff Trend Cycle uqala ukugoqeka emuva.
Inkomba yeScyff Trend Cycle iyi-oscillator esebenzisekayo abathengisi abangayisebenzisa ukuthola ukubuyela emuva kwethrendi. Noma kunjalo, ayiphelele. I-Lag kwesinye isikhathi ingadala ukuthi abathengisi bavule abathengisa sekwephuze kakhulu. Abanye abathengisi bazama ukunxephezela ngokuvula amathenda ngaphambi kokuwela kwangempela kwe 25 noma 75 imigqa.
ISchaff Trend Cycle Indicator ye-MT4 iyi-Metatrader 4 (MT4) inkomba kanye nengqikithi yale nkomba yezobuchwepheshe ukuguqula idatha yomlando onqwabelene.
Isikhombi se-Schaff Trend Cycle Indicator se-MT4 sinikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani iSchaff Trend Cycle Indicator ye-MT4.mq4?
Thwebula Schaff Trend Cycle Indicator for MT4.mq4
Copy Schaff Trend Cycle Indicator for MT4.mq4 to your Metatrader Directory / ochwepheshe / izinkomba /
Qhafaza kwesokudla ku-Schaff Trend Cycle Indicator ye-MT4.mq4
Inkomba Schaff Trend Cycle Inkomba MT4.mq4 iyatholakala kwi Ishadi yakho
Indlela ukususa Schaff Trend Cycle Inkomba MT4.mq4 kusukela Metatrader yakho Ishadi?
Schaff Trend Cycle Inkomba ye MT4 (U-downloader mahhala)
Isiqephu esedluleUmlandeli MA 2 MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoMACD Mega Trend Forex Ukuhweba Isu